दुवै हात नभएर के भो ? प्लेन उडाउँछिन्, तेक्वान्दोमा ‘ब्ल्याक’ बेल्ट पनि « News of Nepal
दुवै हात नभएर के भो ? प्लेन उडाउँछिन्, तेक्वान्दोमा ‘ब्ल्याक’ बेल्ट पनि
काठमाडौं । दृढ इच्छाशक्ति भएमा मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्न केहीले रोक्न सक्दैन । यसको गतिलो उदाहरण बनेकी छन् अमेरिकाकी जेसिका कोक्स ।
न्मदै दुई हात नभएकी जेसिकाका लागि जीवनको यात्रा त्यति सहज थिएन । अपांगताका बाबजुद उनको हिम्मत र इच्छाशक्ति यति सबल थियो कि उनले हरेक प्रतिकुलतालाई अवसरमा परिणत गर्दै आज विश्वकै उदाहरणीय महिला बन्न सफल भइन् ।
जीवनका हरेक मोडमा जेसिकालाई उनकी आमाले साथ दिइन् । उनलाई आत्मनिर्भर बन्न आमाले प्रेरित गरिरहिन् । सन् २००५ मा जेसिकाले पाइलटको प्रशिक्षण लिन थालिन् । सन् २००८ मा उनले फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशनका तर्फबाट एरकुप नामको एउटा सानो विमान उडाउने अनुमतिपत्र हासिल गरिन् ।
हाल उनी आफू जस्ता अपांगता भएकाहरुका लागि प्रेरित गर्न विभिन्न मुलुकमा ‘मोटिभेसन कक्षा’ मा सहभागी हुन्छिन् । उनले करिब २० मुलुकमा त्यस प्रकारको प्रशिक्षण दिइसकेकी छन् । एजेन्सी